Eyona nto ibalaseleyo kwingqungquthela ye-BIM 2019 -Geofumadas
NgoJuni, 2019 Zobunjineli, ezintsha
I-Geofumadas ithathe inxaxheba kwenye yezona ziganeko ezibalulekileyo zehlabathi ezihambelana ne-BIM (Ukwakhiwa kweeNkcukacha zokwakha), kwakuyi-BIM Summit 2019, ebanjwe kwi-AXA Auditorium kwisixeko saseBarcelona-Spain. Esi siganeko sandulelwe yi-BIM Experience, apho unokufumana ingcamango yento eya kuza kule mihla elandelayo.
Ngomhla wokuqala kwi-BIM Experience, imisebenzi yahlula yaba zihloko ezintathu ukuze abahlali bahlale bejolise ngqalelo yabo ngokwezinto zabo, okokuqala Yakha neBIM, yesibini I-Softwares ne-BIM inzuzo, kwaye yesithathu ibhalwe I-BIM kunye nomsebenzi ophezulu. I-Roca Inkampani yabandakanyeka ngumbhali wayo u-Ignasi Pérez, owachaza ukubaluleka kwe-BIM ekwakheni, kunye nemiboniso efana neDatha Ubulumko bokwakha: i-DIN2BIM ngu-PINEARQ, o Ulawulo lweeprojekthi zolwakhiwo ezidityanisiweyo ngokusebenzisa iiNkqubo zeQela eziVulekileyo zeBIM.
Ngethuba lomcimbi, safumana ithuba lokudibana nabaninzi bee-nkampani ezikhokelayo kwihlabathi le-BIM, phakathi kwazo esibhekiselele kwi-BASF, ebonise Master Builders SolutionsIsoftware evumela ukukhawulezisa ukukhangela iimveliso kunye nezinto zeBIM. I-BASF, ibonise abo bezimeleyo ukuba isoftware isebenza njani kwimeko eyiyo, ngokusebenzisa itekhnoloji yenyani yokwenyani.
Icandelo elikhankanywe ngasentla, libonisa ukutyelelwa komsebenzi kunye nendlela umzekelo we-BIM olawulwa ngayo ngexesha langempela kunye nesisombululo esivezwa yesoftware, ukukwazi ukujonga ngeso siphumo sokugqibela; Oku kwakuyidlala efanelekileyo kakhulu yi-BASF, eyanikezela nabaphulaphuli a amakhadibhodi ukuhlala kumava apheleleyo.
"Kwiprojekthi ethile, yenza inkcazo yeemveliso eziyimfuneko kwaye ikuvumela ukukhuphela lonke ulwazi lwaloo mveliso, kubandakanya into ye-BIM ngokuzenzekelayo ngaphandle kokuba uhambe ngelayibrari uze usebenzise izihlungi". U-Albert Berenguel - uMphathi wezeMveliso waseYurophu we-BASF Construction Chemicals Chemicals
Kwakhona, siye sadibana neqela le-Visual Technology Lab, inkampani eyenzelwe ukudala izisombululo kubo bonke abo babandakanyekayo kwicandelo lokwakha, njengokuthi, thatha iimodeli ze-BIM kwiiglasi-iinjongo ezibonakalayo okanye izixhobo eziphathekayo ezifana neselula okanye ithebhulethi , ngenjongo yokulawula iBIM kwisayithi emsebenzini. Banikezela ngenani leenkonzo ezinjenge: BIM ukuhlanganiswa kwinyani eyiyo kunye neyona nyaniso eyongeziweyo, iimpawu ze-BIM-VR ezininzi zomsebenzisi okanye i-360º / 3D-360º imifanekiso yezithombe.
"I-Visual Techology ibonelela ngezicelo ezisebenza kwiselfowuni okanye kwithebhulethi kwaye into esiyenzayo kukubeka ibhokisi yeseshoni kwimodeli, sibeka uphawu lokubeka ngokuthe ngqo kuyo kwaye siyithumela ngaphandle loo bhokisi yeseshoni, hayi imodeli iphela, kanye le nto siyifunayo, ngefowuni ephathekayo, esele ifake itekhnoloji ngaphambili ukuba ngaba yi-Apple ARKit okanye i-Android ARCore, kunokwenzeka ukuba kuguqulwe isikali semodeli, udibane nohlobo lwezixhobo okanye into equlathe imodeli, imilo, ukugqiba nokwenza indibaniselwano ”. U-Iván Gomez-uLebhu yeTekhnoloji yeVidiyo
Emva koko bayaqhuba kohambo intetho nganye kwezi izithethi, sifumana mmeli Lumion Sanchiz Alba, owamcacisela inguqulelo entsha Lumion 9, isixhobo isebenza njani - ubani athi, ngaphezu luncedo kwabo bafuna ukusebenzisa kakhulu ukwakhiwa ukudizayina ixesha kwinkqubo sokufaka. Le software yenza intsingiselo CAD imifuziselo / BIM nikeza them ngendlela elula.
"Lumion 9 sixhasa software BIM kunye noyilo yokwakha njengoko. Sketchup, rhinoceros, Graphisoft ArchiCAD, Autodesk 3DS Max, Allplan, Revit, Vectorworks kunye AutoCAD" Alba Sanchiz -LUMION
Abameli be-GRAPHISOFT, babonise intsha entsha ye-ARCHICAD 22, enye yeprojekthi yecawa yecalaphini kwi-BIM yehlabathi-yolawulo lweedatha kunye nokulungelelaniswa kweprojekthi-kwakhona, yabhengeza iqonga labo elitsha loqeqesho oluqhubekayo.
"Isicwangciso sokuqeqeshwa sisekelwe kwinkqubo yokubhaliselwa, inokutsha kakhulu, ejoliswe kubo bobabini kunye nabaqeqeshi. Awunakhokheli ikhosi ethile, kodwa ngokubhalisa ufumana ukufikelela kuzo zonke izifundo kunye namanqanaba aqulethe , kuxhomekeke kwisidingo somsebenzisi, zonke ziqinisekisiwe kwaye ziqinisekiswe yi-GRAPHISOFT ". I-GRAPHISOFT-ARCHICAD
Awukwazi indiva abameli 5 amazwe Nordic, Denmark, Sweden, Finland, Iceland naseSweden kule okhethekileyo BIM 5ta Summit- ngamnye bamagalelo zakhe swi -Guests ukuncwasa ukuba kusekho Indlela ende yokuya kumxholo weBIM.
Phakathi izalathi, Gudni Gudnasson, esibe sithetha yonke imingeni eza ngokusebenzisa izicwangciso BIM UJan Karlshoj achaze ifuthe iimfuno zoluntu kuba openBIM e Denmark, ekugqibeleni siqaqambisa Anna Riitta Kallinen ezazibonisa yaba iprojekthi RASTI njenge qhinga kunye umendo komgangatho wolawulo ulwazi lokwakha.
Saqhubeka nomhla weentetho, ngethuba lommeli we-Bentley Systems u-Anna Assama, owathatha ubuhlungu obubonisa ukubaluleka kobugcisa bezobuchwepheshe, ubudlelwane babo kunye nokusingqongileyo, nendlela iBentley eye yatshintsha ngayo iindiza zayo ngoku Umbono omtsha wokubandakanywa kwendalo kwimjikelezo wobomi wokwakha.
"I-Synchro, ayiyiyo imbonakalo ye-4D kunye nexesha, yindlela yokulawula ulawulo" - uAna Assama - Bentley Systems
Ke assama achaza, zizixhobo Bentley inika, ngokuqala amafu lwe data kwindawo uhlalutyo inkonzo ilifu-ilifu izakhono ezi - Power in-, izicwangciso - SYNCHRO lungiselelo, ulawulo kunye ezimqoka -SYNCRO XR- ukuthatha konke i-feedaback, igcwalise ngaloo ndlela idale inkqubo ebalulekileyo.
"Synchro uyiyo nantoni na kodwa inkqubo yoyilo kunye Synchro uyakwazi ukucwangcisa nokulawula ulwazi, ethatha kuphela umsebenzi imifuziselo data 3D, okt ukuqala imihla kunye nesiphelo, zingakotshwa kuqikelelwa njengoko kuya kuba njalo ekuphelisweni kweli umsebenzi nabanye Uhlalutyo "Anna Assama - Bentley Systems
I-Digital modeling ngoku ingaba yinxalenye yento yokwenyama, ngokusebenzisa i-Synchro XR ye-Hololens, into ebalulekileyo ngokusekelwe kwinyani edibeneyo, oko kukuthi, ngoku unako ukwakha ngokuqwalasela ingqinamba yendalo.
Ezona ndaba zibalulekileyo, ezazikhankanyiwe kwiNgqungquthela ye-BIM ye-2019, kukuba kuRhulumente waseCatalonia, ukusetyenziswa kwe-BIM kuya kuba sisinyanzelo kuyo yonke imisebenzi yoluntu kunye nokhuphiswano lokwakha; Oku kubhengezwe ngu-Nobhala Jikelele weNdawo kunye noZinzo kuRhulumente waseCatalonia-uFerrán Falcó. Umlinganiso uza kuqala ukusebenza ukusuka nge-11 kaJuni kulo nyaka, kwaye uya kuba nemali engaphezulu kwe-5,5 yezigidi ze-euro. Kufuneka iqatshelwe into yokuba, kumaphondo amaninzi aseSpain, ukusetyenziswa kwe-BIM kuyafuneka kwiiprojekthi zolwakhiwo lukawonkewonke
Xa uhlelo 5ta of Summit BIM awukwazi, khetha leyo ilungileyo, kuba enika amagqabantshintshi yonke into ihlanganise womnatha enkulu kwiinkampani ezinkulu, eliphakathi okanye ezincinane, abaphandi, izifundiswa, abafundi, iluphawu ihlabathi enkulu amathuba, apho abaninzi abaqeqeshi bangathanda ukudibaniswa.
Iphakamisa isimo sengabonakaliso bayo, ukubonisa nganye kwezobuchwepheshe, kunye nokwenza iindwendwe ziqonde ukuba zingatshintsha njani indlela esimele siyibonise ngayo umhlaba wethu okhoyo kunye nokudala ukungenelela kwamandla okanye izinto ngokukhawuleza, ngokufanelekileyo.
Sibulela bonke abo yanika ingcaciso BIM, waza wanika ezintsha zabo, ezifana njengamalungu Solutions simbim, BIM Academy, MUSAAT, Assa ABLOY, Acca, CALAF, ArchiCAD, Smart Building, Institute of Technology yokwakha Catalonia- ITEC, ProdLib. Pinearq, TeamSystem uKwakha Construsoft, le yokugqibela lafumana ibhaso ngenxa yokunyaniseka BIM Summit le 2019.
Sijonge phambili kwisiganeko esilandelayo esihambelana nesi sihloko, sinethemba lokubandakanya ubuchwephesha njenge-GIS - iinkqubo zengcaciso ye-Geographical, eziyimfuneko ekuqaliseni i-dynamics yendawo, ubudlelwane bayo kunye ne-BIM kunye nekrele lonke elibandakanya iphrojekthi yokwakha. Siya phambili!
Post edlulileyo«Ngaphambilini Ukuvavanya ukuchaneka kwedatha yokuphakama kukaGoogle-Yothusa!
Post Next Sisungule iGeo-Injineli-imagaziniOkulandelayo »